13 kuraas Embraer Legacy 650 Diyaaradaha Aviation Review Gudaha Charter Air Jet Private Flight Service ganacsi ama Company kirada diyaarad shakhsi ii soo dhowaan, waayo, meesha aad u socoto safarka soo socda ee badhtamaha size-pilot deadhead quote lugta madhan meesha aad degan tahay.
Marka ay timaado in Diyaaradaha charter waxaa jira yaraanta lahayn fursadaha. Mid ka mid ah doorasho caansan waa Legacy Embraer ah 650 diyaarad jet. Tani Legacy Embraer 650 dib u eegis diyaaradaha jet dumin doonaa sababaha madaxda u badan iyo kuwa kale oo qaadan duulimaad charter dooran diyaarad this gaar ah duulimaad gaar loo leeyahay ay.
Embraer Legacy The 650 waa epitome ee raaxada iyo style. Wuxuu leeyahay saddex weliba qolalkii hoose oo kala duwan oo qolka ilaa 14 rakaab ah. jet waxa uu leeyahay meel ugu qol ee ay fasalka iyo waxa ay sidoo kale la iman credenza a, labis buuxda, iyo a 134 musuqusha cagta cubic (sidoo kale ugu weyn ee ay fasalka).
Embraer Legacy The 650 ayaa damaanad ugu dheer in industry ee 10 sano ama 10,000 saacadood duulimaadka. Intaa waxaa dheer, kooxda taageerada macaamiisha shirkadda ee waa firfircoon 24/7, oo waxaa jira in ka badan 70 xarumaha adeegga dunida dacaladeeda in ay ka go'an adiga iyo jet in. Tani waa sababta Embraer ayaa kaalinta #1 in waqti iyo waqti taageero macaamiisha mar kale, oo taasuna waa sababta waxaa jira haatan ka badan 1,200 oo ka mid ah Diyaaradaha ee adeega la isu geeyey a 26 milyan oo mayl u duulay.
Kharashka Operating Low
Embraer Legacy 650 duulimaadyo charter aerospace diyaaradiisa khaaska ah ay leeyihiin qaar ka mid ah kharashka hawlgalka adduunka ugu hooseeya. Tani jet isticmaalka sare isticmaalaa shidaalka matoorada ku ool ah iyo design diyaarada ayaa micnaheedu waxa uu leeyahay kharashyada dayactirka in ay yihiin on par leh kuwa badan oo diyaarad laba qol. Iyada oo kala duwan oo ka mid ah 3,900 nautical miles (afar rakaab ah) iyo awoodda payload ku dhow a 5,000 rodol waa ay fududahay in la arko sababta madaxda badan oo si gaar ah u dooran jet this.
Haddii aad u baahan tahay jet oo lagu kalsoonaan karo oo ballaadhan ka dhigaya rakaab dareemi gaarka ah iyo u ogolaanaya inay si raaxo leh u shaqeeyaan markaas Embraer ah Legacy 650 waa ikhtiyaar adag. Waxay isku daraa raaxo, halaynta iyo kharashka hawlgalka hooseeyo si ay u siiyaan dadka isticmaala la jet ah oo ka shaqaysa weyn in aad aad ugu isticmaalin, waayo, ganacsiga ama raaxo.
EMBRAER Jet Legacy 650 Interest muddo:
EMBRAER Diyaaradeed Legacy 650 Interest by subregion
Instagram: EMBRAER 750 dhaxalka 650 diyaarad Jet Gudaha
Embraer Legacy 650 Raaxo Diyaaradaha Aviation Gudaha Private Jet Charter Service Flight #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury #Embraer # EmbraerLEGACY650Jetairliner # EmbraerLegacy650 # EmbraerLegacy650seating # EmbraerindustrieLegacy650 #Legacy 650Embraer #Luxuries #lifestyle #traveler
post A wadaago by WysLuxury JetCharter (@wysluxury) on Dec 10, 2017 at 6:53pm PST